कांग्रेस १४औं महाधिवेशनः २६ जिल्लाको अधिवेशन सकिदा कुन पक्ष बलियो ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलले १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरु ग्रिरहेको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली र पहाडी जिल्लामा कांग्रेसका जिल्ला अधिवेशन भइरहेका छन् । यस्तै दुई वा दुई भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा मंसिर १० गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने काँग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेसले बुधबारसम्म २६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार १३ हिमाली जिल्लामा दशैंअघि नै अधिवेशन भएका थिए । अन्य जिल्लामा भने मंसिर ६ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु भएक हुन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका परियणाम अनुसार जिल्ला सभापतिमा संस्थापन समूह र संस्थापन इतर समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । २६ जिल्लामध्ये संस्थापन समूहले १४ जिल्लामा नेतृत्व सभापति जितेको छ । भने संस्थापन इतर समूहले १२ जिल्ला सभापति जितेको छ ।
संस्थापन समहले ताप्लेजुङमा गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ, हुम्लामा मोहनविक्रम सिंह, रामेछापमा पूणर्बहादुर तामाङ (कान्छाराम), मुगुमा ऐनबहादुर शाही, बझाङमा खडक बोहरा, म्याग्दीमा खमबहादुर गर्बुजा र मनाङमा शंकर गुरुङ जिल्ला सभापति चुनिएका छन् । यस्तै सल्यानमा केशरबहादुर विष्ट, डोल्पाबाट दीपेन्द्र शाही, डडेल्धुरामा भीमबहादुर साउद, जुम्लामा कणर्बहादु शाही, जाजरकोटमा बेदराज सिंह, पाँचथरमा रुपनारायण जवेगु र लमजुङमा डा. टकबहादुर गुरुङ सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । जाजरकोटका सिंह र मनाङबाट गुरुङ सर्वसम्मत सभापति चयन भएका हुन् ।
त्यस्तै संस्थापन इतर समूहले संखुवासभा जिल्ला सभापतिमा दीपक खड्का, कालीकोटमा अम्मबहादुर शाही, दोलखामा बर्मा लामा, मुस्ताङमा रोमी गौचन, रुकुम पूर्वमा केशरमान रोका, गोरखामा नन्दप्रसाद न्यौपाने र बाजुरामा रामसिंह रावल जितेको छ । यस्तै अर्घाखाचीमा केशव श्रेष्ठ, प्यूठानमा विष्णुकुमार गिरी, बैतडी चतुरबहादुर चन्द, भोजपुर विनोद बान्तवा र तेह्रथुममा अर्जुनबहादुर तुम्बाहाङ्फे जिल्ला सभापति बिजयी छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ८, २०७८, १५:०९:००